> Resource > iCloud > Sida loo kaabta iCloud Xiriirada in kombuutarka
Waa fikrad fiican in gurmad aad xiriirada aad iCloud. Si aad wax badan ka taxadarnaa in, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale doonayaan in ay gurmad iCloud xiriirada in kombuutarka, Gmail, Muuqaalka iyo xisaab kale. Markaas, marka aad tirtirto xiriirada in iCloud, aad isla iyaga ka heli karto dib la xiriir gurmad faylka aad kombuutarka. Halkan, qodobkan wuxuu kuu sheegayaa in xal loo helo taageero ilaa xiriiro oo la soo doortay oo dhan ama in iCloud in aad PC. Dhammaan waa in aad u diyaariso waa in ay leeyihiin wehel Lugood la odhan jiray Wondershare TunesGo . Iyadoo software this, aad awoodaan in ay gurmad wax xiriir ah in iCloud.
Download TunesGo in gurmad xiriirada ka iCloud.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan la isticmaalayo MobileGo waa inuu gurmad aad ka mid ah xiriirada, oo aad soo gasho waa in aad xisaabta daruur aad iPhone, iPad ama iPod. TunesGo si buuxda u taageersan iPhnes badan, iPod iyo iPads. Riix halkan si aad u hesho info dheeraad ah oo ku saabsan aaladaha Apple taageeray.
iCloud xiriirada gurmad in talaabooyin fudud
Hadda, aad u hesho TunesGo rakibay aad kombuutarka. Waxaa Launch, oo aad ka heli furmo suuqa hoose hoos ku qoran.
Tallaabada 1. Connect iPhone / iPod / iPad in kombuutarka
Connect aad iPhone, iPad iPod ama in PC la cable USB ah. Marka uu ku xiran, TunesGo ogaan doonaan iyo in la aqoonsado aad iPhone, iPad ama iPod. Markaas, sida aad ka arki, xogta ay ka mid yihiin muusiga, sawiro iyo xiriirada aad iPhone, iPad iPod ama lagu soo bandhigi doonaa galeeysid bidix ee suuqa hoose.
Tallaabada 2. xiriirada kaabta on iCloud
Haddii aad saxiixday in aad xisaabta iCloud, xiriirada waa la soo bandhigi doonaa in "Xiriirada" category. Riix group iCloud ah. Dhammaan xiriirada on iCloud muuqdaan Murayaad saxda ah. Dooro xiriirrada in aad rabto in gurmad ama xushay dhammaan dadka ay khuseyso.
Markaas, guji "Import / Dhoofinta"> "dhoofinta Dhammaan Xiriirada"> "Dhoofinta Xiriirada soo xulay"> "A vCard File Single", "si ay u Multiple vCard Faylal ay" ama "in CSV File". Marka uu furmo suuqa file browser soo booda, maraan si ay u socoto, halkaas oo aad jeceshahay in aad badbaadin file vCard ah (s). Markaas, TunesGo bilaabo inuu gurmad xiriirada iCloud.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta gurmad ah, aad edit karaa, midowdo ama tirtirto iCloud xiriirada tusay aad iPhone. Markaas, dooro xiriirada in aad rabto in gurmad. Xusuusnow in xiriirrada iCloud on server Internet maayo sida bedelay.
Hambalyo! Waxaad xoojiyaa xiriirka la iCloud aad kombuutarka. Dhab ahaantii la TunesGo, aad awood u taageerto kor u iCloud xiriirada in Outlook 2003/2007/2010/2013, Outlook Express , Windows Cinwaanka Kitaabka, iyo Windwos Live Mail.
Isku day TunesGo in la sameeyo xiriiro iCloud gurmad.